लयमा फर्कदैं बाग्लुङकाे पर्यटन - Samadhan News
राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) २०७८ कार्तिक ५ गते १२:५२
बलेवा, वाग्लुङ ।
जिल्लाको जैमिनी नगरपालिका–१ का प्रकाश शर्माले हाँडिकोट टापु पुग्ने योजना बनाएको चार वर्ष भयो । काठमाडौँमा पढाइ र रोजगारीका लागि बस्ने उहाँले दसैँमा मात्रै लामो बिदा पाउनुहुन्छ । कहिले दसैँ बिदामा वर्षा नसकिने त कहिले कोरोना त्रासका कारण चार वर्ष पहिलेको योजना उहाँले अहिले पूरा गर्नुभयो । समुद्री सतहदेखि दुई हजार १९५ मिटर उचाइमा रहेको हाँडीकोट पुग्दा उहाँ दङ्ग हुनुहुन्थ्यो ।
जैमिनी–ं १० मा पर्ने हाँडिकोट जिल्लाको प्रसिद्ध पर्यटकीयस्थल हो । यहाँबाट दर्जनौँ हिमशृङ्खला देख्न सकिन्छ । मुटु छुने चिसो ! लुगलुग कमाउने सिरेटो हाँडीकोटमा चलिरहन्छ । वर्षाका समयमा जुकाको समस्या, हुस्सु र कुहिराले ढाकिने भए पनि हिउँदमा हिउँले घुम्टो नहालुञ्जेल हाँडीकोट पर्यटक पर्खिरहेको हुन्छ ।
असोज, कात्तिक र मङ्सिरको दोस्रो साता हाँडीकोट घुम्नका लागि योग्य समय हो । चैत वैशाख र जेठमा पनि यहाँ धेरै आन्तरिक पर्यटक पुग्ने गरेका छन् । जैमिनीको राङ्खानी, वडा नं ७ जैदी र वडा नं ८ छिस्तीको सङ्गमस्थल हाँडीकोट टापु साँच्चिकै सुन्दर छ । त्यहाँ पुगेर ‘आहा ! हाँडीकोट टापु’ नभनी सुखै छैन । बितेका वर्षमा भन्दा यो वर्ष हाँडीकोट धेरै आन्तरिक पर्यटक पुगेका छन् ।
नेपालको एकमात्रै शिकार आरक्ष, ढोरपाटन शिकार आरक्ष पुग्ने पर्यटकको सङ्ख्या पनि बितेका दुई वर्षमाभन्दा यो वर्षको दसैँ बिदाका समयमा धेरै भयो । त्यहाँ पुग्ने पर्यटकको तथ्याङ्क त कसैले राख्ने गरेको छैन् तर आरक्ष क्षेत्रका व्यवसायीका अनुसार यो वर्ष ढोरपाटन पुग्नेमा उत्साहित छन् ।
तीन जिल्ला बागलुङ, म्याग्दी र रुकुममा फैलिएको शिकार आरक्षमा सिकारका याममा विदेशी पर्यटक हेलिको सहायताले पुग्छन् भने पैदल र सवारीको सहायतामा शिकार आरक्ष घुम्न जाने पर्यटकका लागि बागलुङ हुँदै पुग्ने बाटो सहज छ । धेरै समयपछि घुम्दै ढोरपाटन आएँ’ पोखराका साइकल यात्री दिवस गुरुङले भन्नुभयो, “ढोरपाटनको योजना बनाएर आउँदा बीचमा बागलुङ घुम्ने ठाउँ धेरै रहेछन् ।”
सदरमुकाम आसपासमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रमा त दसैँअघिदेखि नै पर्यटकको चहलपहल सुरु भएको थियो । ‘बागलुङ कालिका खुला भएदेखि देशभरबाट पर्यटक बागलुङ भित्रिन सुरु गरेका हुन्’ जिल्ला पर्यटन समितिका अध्यक्ष राजु खड्काले भन्नुभयो, “हाम्रा लागि यो वर्षको घुम्ने सिजन शुभ रहने सङ्केत मिलेको छ ।”